05:27:37 am 24-Feb-2018
नयाँ पुस्ताको उपेक्षाले ‘पाल्पाली करुवा’ उद्योग धराशायी
पाल्पा । पाल्पाको पहिचान बोकेका ‘पाल्पाली करुवा’ उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् ।
सदरमुकाम तानसेनस्थित टक्सारटोलका उद्योगमा पर्याप्त मात्रामा करुवा उत्पादन हुँदै आए पनि पछिल्ला वर्षमा कच्चापदार्थ र दक्ष कामदारको अभावमा वर्षेनी करुवा उद्योग बन्द हुँदै गएका छन् ।
करुवा बनाउने सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा र उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ धातु, काँच, मैन र कोइलाको अभावले उद्योग संकटमा परेका हुन् । विगतमा तानसेनमा २५ वटा उद्योगमा करुवा उत्पादन हुँदै आए पनि पछिल्लो वर्षमा तीनवटा मात्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगका सञ्चालक प्रदीप बज्राचार्यले बताए।
“माग बढी भए पनि उद्योग बन्दै हुँदै गएपछि आपूर्तिमा समस्या भएको छ,” उनले भने। पाल्पाली करुवा मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । दशैँदेखि कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्न नसक्दा उत्पादन न्यून मात्रामा गर्न सकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
स्थानीय तह, घरेलु उद्योग र पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको बेवास्ताका कारण वर्षेनी उद्योग बन्द हुँदै गएका हुन् । पहिला मासिक रु ५० हजारदेखि रु ६० हजारसम्म आम्दानी हुने गरे पनि हाल उत्पादनमा कमी आउँदा आम्दानी घटेको छ । पाल्पाली करुवा हस्तकलाको प्रयोग गरी निर्माण गर्दा मेहनत र श्रम बढी लाग्ने भएकाले अन्य ठाउँको भन्दा महँगो हुन्छ ।
“भोजपुरी र पोखरेली करुवा मेसिनद्वारा उत्पादन गरिन्छन्, पाल्पाली करुवा हस्तकलाको प्रयोगले निर्माण गरिन्छ,” तानसेन टक्सारका करुवा व्यवसायी लालचन्द्र शाक्यले भने। लोप हुने अवस्थामा पुगेको पाल्पाली करुवाको संरक्षण तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहबाट पहल गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पाल्पाली करुवा उपहार आदानप्रदानका लागि बढी प्रयोग गरिँदैआएको छ । यहाँको करुवा जापान, बेलायत, अमेरिका र थाइल्याण्डसम्म निर्यात हुने गरे पनि मागअनुसार उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । करुवासँगै काँचका थाल, कचौरा, पानसलगायत सामग्री किन्न उपभोक्ता यहाँ आउने गरेका छन् ।
जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र भट्टराईले पाल्पाली करुवा संरक्षणका लागि तथा उत्पादन बढाउन अध्ययन भइरहेको बताए।
छोराले बनाए आफ्नै आमालाई गर्भवती !
रक्सी पिएपछि मानिस फरर अँग्रेजी बोल्छन्, किन बाेल्छन् ? यसो..
कुकुरलाई टोक्ने मानिस पक्राउ परेपछि
चीनले बनायाे अदभुत संग्राहलय (हेर्नुहोस् तस्बिरमा)
चार लाख भिखारीलाई सरकारले तालिम दिने !
जुत्ता उद्योगलाई सबै सेवा दिन खुल्यो कम्पनी, कामदार, डिजाइन, मर्मत र परामर्स दिने
पहिलो पटक जापानलाइ व्यापार घाटा
धेरै पछि आइतबार दिनार,रियाल,दिर्हाम र रिंगिटको मूल्य बढ्यो